१४ माघ २०६९, आईतवार १७:१९	0 587
यसरी धोऔं फेसबुकमा अनुहार
१३ माघ २०६९, शनिबार ०९:०८	0 319
फेसबुक, इन्टरनेटमा व्यक्तिको अनुहार हो। वास्तवमा फेसबुकको शाब्दिक अर्थ पनि यही नै हो। इन्टरनेटमा निशुल्क उपलब्ध यो सामाजिक सञ्जाल मानिसहरुको व्यक्तित्व सार्वजनिक गर्नका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसो त फेसबुक आफ्नो विचार र्सार्वजनिक गने मञ्चको रुपमा पनि प्रयोग हुँदै आएको छ। फेसबुक विचार मन्थनको स्थल तथा सार्वजनिक विषयमा छलफल गर्ने मञ्च पब्लिक स्पेयरका रुपमा विकास हुनुको पछाडी बढ्दै गएको इन्टरनेटको पहुँच र साक्षरताको वृद्धिले पनि हो। यतिखेर फेसबुकमा राजनीति देखी समाजका समसामयिक विषय छलफल तथा स्टाटस अपडेट हुने मुख्य कुरा बनेका छन्। मानिसहरुले आफ्नो मनमा लागेका कुरा फेसबुकको प्रश्न 'हाउ आर यू डोइङ' को जवाफका रुपमा लेख्दिइ हाल्छन्।तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सार्वजनिक मञ्चको रुपमा विकास भएको फेसबुकमा कुनै पनि विचार राख्दा वा तस्विर राख्दा त्यसले भविष्यमा पार्ने प्रभाव के पर्छ? त्यो हो। जागिर वा राजनीतिक नियुक्तिकै सवालमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्नु अघि नै सम्बन्धितले तपाइँको फेसबुक तथा इन्टरनेटमा उपलब्ध अन्य सार्वजनिक मञ्चमा तपाईंको उपस्थिती र त्यसमा व्यक्त कुराहरुको अध्ययन गर्छ।
ब्ल्याकबेरीमा डाटा सुरक्षा
९ माघ २०६९, मंगलवार १६:२५	0 396
ब्ल्याकबेरी मोबाइल फोन सँगै इण्टरनेट सेवाका लागि समेत उपयुक्त मानिन्छ। यसको आफ्नै प्रणाली समेत रहेकाले ब्ल्याकबेरी प्रयोगकर्ताहरुले सहज इण्टरनेट प्रयोग गर्न सक्छन। जसकारण ब्ल्याकबेरी प्रयोगकर्ताहरुले मोबाइलमा डाटा स्टोर गर्ने बढी सम्भावना पनि हुन्छ। अहिले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो डाटा सुरक्षा खतरालाई ध्यानमा राखेर ब्ल्याकबेरीमा डाटा सुरक्षाका लागि समेत विभिन्न सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसनहरु विकास भएको पाइन्छ। यहाँ ब्ल्याकबेरी प्रयोगकर्ताका लागि डाटा सुरक्षाका केही जानकारीहरु प्रस्तुत गरिएको छ।
यसरी राखौं नोकिया फोन सुरक्षित
८ माघ २०६९, सोमबार १२:५८	1 690
नोकिया नेपाल लगायत विकासशील मुलुकहरुमा धेरै प्रयोग हुने मोबाइल सेट हो। यसको नेटवर्क टिप्ने क्षमता र गुणस्तरमा धेरैलाई विश्वास भएकाले विकासशील मुलुकका मानिसहरु यसमा बढि आकषिर्त छन्। पहिलो जीएसएम मोबाइल सेट उत्पादन गरेको कम्पनी भएका कारण पनि जीएसएम मोबाइल लिनेहरुको पहिलो रोजाइमा यो परेको हुनसक्छ। नोकियाले उत्पादन र उपभोक्तालाई सुरक्षित राख्नको लागि मोबाइल चोरी र डाटा चोरीबाट बच्ने विभिन्न उपाय र प्रविधिको विकास गरेको छ। नोकिया ब्राण्डमा अहिले पनि धेरैजसो 'सिंबियन प्लेटफर्म’ सबैभन्दा बढी लोकप्रिय अपरेटिङ सिष्टमको रुपमा उपयोग हुने गरेको छ। यो सिष्टममा ब्ल्याकबेरी, आइफोन तथा एण्ड्रोइड जस्ता सुविधा उपलब्ध छैनन। तर, यसमा पनि प्रयोगकर्ताहरुका लागि केही सुविधाहरु भने उपलब्ध छन्। यसमा प्रयोगकर्ताले मोबाइल तथा डाटा चोरी हुनबाट रोक्न एण्टी थेफ्ट प्रोग्राम सजिलै चलाउन सक्छन । जसबाट यो अपरेटिङ सिष्टम भएका नोकिया मोबाइल प्रयोगकर्ताले डाटा सुरक्षाका लागि धेरै चिन्तित भइहाल्नु पर्दैन। यो लेखमा यसबारेमा केही जानकारी
७ माघ २०६९, आईतवार १६:३३	1 748
मोबाइल, गोजीमा नै अट्ने सञ्चारको साधन। हातमा लिएर यसो नम्बर डायल गरयो कि जहाँसुकै भएको मानिस होस् तत्काल कुराकानी गर्न सकिन्छ। सञ्चारको सजिलो साधन भएकाले यसको प्रयोग गर्नेको संख्या विश्वभर नै बढिरहेको छ। विश्वभर प्रयोगकर्ता बढेको यो उपकरण र सेवाको नेपालमा प्रयोगकर्ता नबढ्ने कुरै भएन। सस्तो हुँदै गएको सेवा र उपकरणसँगै यसको प्रयोग पनि सस्तो हुन थालेको छ। घरको तल्लो तला र माथिल्लो तलामा रहेका बीच नै मोबाइलमा कुराकानी हुन थालेको छ। यसले मोबाइल नेटवर्कलाई कति बिजी बनाएको होला? त्यो छुट्टै कुरा भयो। देशको अर्थतन्त्र र साधन स्रोतको दूरुपयोगको सवालमा पनि नजाऔं यसखालको मोबाइल प्रयोग र फोन गराइले तपाइँको व्यक्तिगत अर्थव्यवस्थामा भने भुइँचालो नै ल्याउन पनि सक्छ। विशेष गरेर प्रिपेड मोबाइल बोक्नेहरुका लागि मोबाइलमा गरिने रिचार्ज अनि घट्ने ब्यालेन्सले हैरान नै बनाउँछ। बिल पनि नआउने र रिचार्ज गरेको एकमुष्ट हिसाब पनि नहुने भएकाले मोबाइलमा भएको खर्चको हिसाबै हुँदैन। अर्थात् तपाइँको मोबाइलमा पैसा बेहिसाब खर्च भइरहेको हुनसक्छ। त्यसलाई घटाउनु तपाइँको लागि निक्कै मुस्किलको कुरा पनि हुनसक्छ। आउनुस मोबाइलमा अनावश्यक पैसा खर्च भएर हैरान हुनुभएका कालागि नचाहेको वा अनावश्यक सेवाका नाममा अञ्जानमै धेरै पैसा खर्च भइरहेकाहरुका लागि केही सुझाव
विण्डोजका रन कमाण्डहरु
१६ पुष २०६९, सोमबार १६:३०	0 360
माइक्रोसफ्टको विण्डोज अपरेटिङ सिस्टम चलाउनुहुन्छ भने तपाइँका लागि यी हुन् रन कमाण्ड। जसले स्टार्टमा क्लिक गर्दा देखिने रनको टेक्स्ट बक्समा टाइप गरेर इन्टर गरेपछि यसखालका काम गर्छन्।
यहाँ छन् फ्रि हिन्दी गीत
७ पुष २०६९, शनिबार १३:२२	0 387
बलिउड विश्वको नै सबै भन्दा ठूलो फिल्म उद्योग हो। जहाँबाट वाषिर्क एक हजार भन्दा बढी फिल्म बनेर सिनेमा हलमा पुग्छन्। त्यसैगरी भारतको संगीत उद्योग पनि विश्वको ठूलोमा पर्दछ। जहाँबाट वार्षिक हजारौं, लाखौं गीत र अन्य संगीत उत्पादन विश्व बजारमा उत्रन्छन्। नेपालसँग जोडिएको दक्षिणी छिमेकी भएका कारण नेपालमा भारतीय सिनेमा तथा गीतको प्रभाव र बजार धेरै छ। हिन्दी सिनेमा र टेलिभिजन धेरै हर्ेर्ने भएकाले नेपालका धेरैले हिन्दी बुझ्दैनन् मात्र बोल्छन् पनि। त्यसो त मातृभाषा संस्कृत, मिल्दोजुल्दो संस्कृती र देवनागरी लिपी भएका कारण पनि नेपालीका लागि हिन्दी धेरै सजिलो छ। अंग्रेजीका तुलनामा नेपालीले हिन्दी धेरै गुणा जान्दछन्। त्यस कारण पनि नेपाल र नेपालीबीच हिन्दी गीतहरु लोकप्रिय छन्। नेपालका रेडियो र टेलिभिजन स्टेशनले पनि नेपाली भन्दा बढी हिन्दी गीत नै बजाउने गरेका छन्। त्यसले गर्दा पनि नेपाली जमात धेरै छ हिन्दी गीत सुन्ने।
६ पुष २०६९, शुक्रबार १५:४५	0 368
५ पुष २०६९, बिहीबार १४:०४	2 741
वेबसाइट, इन्टरनेट तथा वेबस्पेशको एउटा भाग। यसलाई वेबपेज पनि भनिन्छ। इन्टरनेटमा बढेको मानिसहरुको पहुँच र निर्भरताले वेबसाइटलाई अनिवार्य आवश्यकताको साधन बनाएको छ। विशेष गरेर व्यवसाय गर्ने वा सेवा दिने संस्थाकालागि वेबसाइट अनिवार्य छ। वेबसाइट नभएको कम्पनी वा संस्था नेपालमा त पाउन सकिन्छ तर नेपाल बाहेक विकसित मुलुकमा भने करिब करिब असम्भव छ। वेबसाइट पनि नभएको विद्यालय, व्यसायिक संस्था वा कम्पनीको कल्पना पश्चिमा मुलुकका नागरिक त गर्दै गर्दैनन्। सरकारी निकायका मानिस नै उपस्थित हुनुपर्ने बाहेक सबै खालका सेवाहरु ती निकायका वेबसाइटबाटै लिन सकिन्छ। सूचना जानकारी र सेवा मात्र नभएर खरिद बिक्रि पनि वेबसाइटबाट गर्न सकिने भएको दशक हुन लागिसकेको छ। इन्टरनेटमा दैनिकी अभ्यस्त हुँदैजाँदा समाचार र विचार अभिव्यक्तिका लागि पनि यसैलाई माध्यम बनाइन थालेको छ। मुलधारे भनिने छापा पत्रकारितालाई अनलाइन पत्रकारिताका रुपमा वेबसाइटका रुपमा उदाएका मिडियाले वैकल्पिक बनाउन लागिसकेका छन्। यी सबै वेबसाइटको सफलता र प्रभावकारिता भनेको त्यसमा भएका सामग्री कतिजनाले हेर्छन् वा पढ्छन् भन्नेले देखाउँछ। जसलाई विभिन्न माध्यमबाट मापन गर्न र गन्न सकिन्छ।
२९ मंसिर २०६९, शुक्रबार १२:१५	0 345
मोबाइल फोन, सबै भन्दा सजिलो र भरपर्दौ माध्यम भएको छ यतिखेर। सम्पर्क र सम्बन्धका लागि मात्र होइन। यो एउटा फोन भन्दा कैयौं गुणा बढी बनिसकेको छ। यसमा समयसँगै जोडिन आएका नयाँ सुविधा र सेवाका कारण मोबाइल एउटा कुराकानी गर्ने यन्त्र भन्दा धेरै बढी भइसकेको छ। स्मार्ट बनिसकेको छ मोबाइल नयाँ र अनौठा सुविधाका साथ। स्मार्टफोनको रुपमा विकास भएको यो मोबाइल धेरै कम्प्युटिङ सुविधाका साथ आएको छ। यससँगै स्मार्ट मोबाइल धारकका लागि नयाँ चुनौति पनि थपिन थालेका छन्। किनकी मोबाइल बोक्ने मात्र होइन हृयाकर र स्पाइवेयरको खेती गर्नेहरु पनि स्मार्ट भइसकेका छन्। त्यसैले लिनेको संख्यासँगै बढिरहेको छ स्मार्टफोनमा खतरा, असुरक्षा र थ्रेट। स्मार्ट फोनमा रहेको कम्प्युटि सुविधा साथै पुरानो फिचर फोनको तुलनामा राम्रो क्यामेरा। संगित, सिनेमा हेर्न सकिने सुविधा, इन्टरनेट र विभिन्न सफ्टवेयर राख्न सकिने सुविधाले फोनलाई मात्र होइन फोन बोक्नेलाई पनि स्मार्ट बनाएको छ। तर इन्टरनेटको सुविधाले स्मार्टफोनको माध्यमबाट जति राम्रो कनेक्टिभिटिमा सुधार भएको छ र सुविधा मिलेको छ त्यति नै त्यसबाट खतरा पनि उत्पन्न हुने गर्दछ। यी खतराबाट स्मार्टफोन र आफूलाई जोगाउन सक्नुभयो भने मात्र तपाइँ बन्नुहुन्छ असली स्मार्ट।
यहाँ छन् आइकन
२९ मंसिर २०६९, शुक्रबार १०:२०	0 285
आइकन, कुनै पनि कुरालाई बुझाउने चित्रात्मक अभिव्यक्ति हो। जसको माध्यमबाट सजिलो तरिकाले विभिन्न कुराहरु बुझाउन सकिन्छ। विशेष गरेर डिजिटल उपकरणमा यस खालको आइकनको प्रयोग धेरै हुने गर्दछ। मोबाइल, कम्प्युटर तथा ट्याब्लेटहरुमा आइकनको प्रयोगबाट विभिन्न फाइलको आकार तथा स्टाइलमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने कतिपय अवस्थामा आइकन मनोरञ्जनको माध्यम पनि हुनसक्छ। त्यसो त विद्यालय तथा कलेजमा विभिन्न स्थानहरुलाई आइकनले जनाउन पनि सकिन्छ। लोगो तथा चित्रकारीको क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि आइकन झनै महत्वको हुन्छ। जहाँबाट नयाँ आइडिया लिन सकिन्छ। वेबसाइट डिजाइन तथा सफ्टवेयरको क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि पनि आइकनको महत्व उत्तिकै छ। रेफरेन्सका लागि पनि यस्ता आइकनको प्रयोग हुन सक्छ। विभिन्न विषयका आइकन खोज्नका लागि गुगलको सहारा लिनुभएको छ भने तपाइँको समय धेरै खर्च भइरहेको हुनसक्छ। इन्टरनेटमा यस्ता पेजहरु पनि छन् जसले आइकन मात्र संकलन गरेर राखेका छन्।
किबोर्डबाट चलाउनुस् यूट्यूब
२५ मंसिर २०६९, सोमबार ०५:१४	0 369
यूट्यूब, भिडियोको भकारी। अनेकन विषय र क्षेत्रका भिडियो तथा फिल्म उपलब्ध छन् यहाँ। त्यो पनि निशुल्क। घरमा बसेरै फिल्म हेर्न देखी विभिन्न च्यानलहरु हेर्न सकिन्छ यसमा। गुगल आफैले दुईसय भन्दा बढि च्यानल चलाएको छ यसमा। स्मार्ट टिभी आइसकेपछि त यसको विशेषता र प्रयोगको कुरा नै बेग्लै भइसकेको छ। विश्वमा सबै भन्दा बढि हेरिने तेस्रो नम्बरमा रहेको यो वेबसाइट नेपालीका लागि पनि हेर्ने लिस्टमा अगाडि नै रहेको वेबसाइट हो। यसमा रहेको नेपाली फिल्मको संख्या पनि उल्लेख्य नै छ। यसमा रहेका भिडियो तथा फिल्महरु डाउनलोड पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो त कम्प्युटरमा नरोकिइकन हेर्न सकिने भइसकेको छ यूट्यूब। नेपाल टेलिकमले क्यासे र्सभर राखेपछि नेपालमा यूट्यूबका भिडियो सजिलै हेर्न सकिने भएको हो। यूट्यूब हेर्दा किबोर्डबाट नै यसका विभिन्न कामहरु चलाउन सकिन्छ।
यात्रामा मोबाइल चार्ज…
२२ मंसिर २०६९, शुक्रबार ०८:०३	0 239
कतै घुम्न जान लाग्नुभएको छ या शहरबाट घर फर्किंदै हुनुहुन्छ। वा कतै आफन्तकोमा भेटघाटका लागि लामो यात्रामा निस्कन लाग्नुभएको छ भने त्यतिबेला आवश्यक पर्छ मोबाइलका लागि एक्स्ट्रा ब्याकअप। किनकी लामो बसयात्रामा तपाइँको समय कटाउने माध्यम र साथी भनेको नै ग्याजेट हुन्छ। फोन, एमपीथ्री वा आइपड गीत सुन्न, खेल खेल्न अनि सिनेमा नै हेर्न मिल्ने सुविधा फोन लगायतका ग्याजेटमा भएपछि यात्राका लागि साथी भनेका नै गोजीमा रहेका ग्याजेट हुन थालिसकेका छन्। यस्तोमा एउटा समस्या भनेको मोबाइल वा यस्ता ग्याजेटको ब्याट्री ब्याकअपलाई कसरी लामो समय टिकाउने हुन्छ। यात्राको समस्या भनेको यस्ता उपकरणलाई कसरी चार्ज गर्ने भन्ने हो। किनभने लामा लामा बस यात्राका क्रममा यी उपकरणका ब्याट्री खेल, भिडियो अनि गीतमा रमाउँदा नै सकिन थाल्छन्। ब्याट्री सकिने डरले नै यात्राका क्रममा मोबाइलको कम प्रयोग गर्नेहरु पनि प्रसस्त छन्। तर यसखालका डर र समस्याबाट जोगिनका लागि उपाय पनि प्रसस्त भइसकेका छन्।
स्मार्ट फोन किन्नु अघि…
२१ मंसिर २०६९, बिहीबार १५:१२	0 333
तपाइँले बोकिरहनु भएको फोन दुई वर्षअघि किन्नु भएको हो भने त्यो भन्दा राम्रो र ज्यादा सुविधा भएको फोन खरिद गर्नका लागि तपाइँ पछि परिसक्नुभयो। फिचर फोनलाई सेकेण्ड हृयाण्ड दाममा बेचेर स्मार्ट फोन किन्ने सोच बनाउनु तपाइँका लागि आवश्यक भइसकेको छ। स्मार्ट फोनमा रहेका स्मार्ट सुविधाले तपाइँको कनेक्टिभिटिलाई धेरै अगाडि लैजानेछ। त्यसैले एप्पलको आइफोन नै नसकेपनि एण्ड्रोइड अपरेटि सिस्टमको स्मार्ट फोन लिनु तपाइँका लागि अति जरुरी भइसकेको छ। साथीभाई देखी आफन्त सबैका हातमा आएको स्मार्टफोनले तपाइँको फिचर फोनलाई पक्कै पनि गिज्याइ रहेको होला। अथवा तपाइँ आफैलाई पनि इन्टरनेट र अन्य धेरै कम्प्युटिङ सुविधा भएको फोनको आवश्यकता महशुस भएको हुनसक्छ। तर त्यसो भन्दैमा एण्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम देखेर सबै स्मार्टफोन उस्तै त हुन् भन्ने विचार राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाइँ गलत हुनुहुन्छ।
यसरी छोटो हुन्छ वेब ठेगाना
२० मंसिर २०६९, बुधबार ०१:४४	0 301
ब्लग तथा वेबसाइट चलाउनुहुन्छ र त्यसको लिंक फेसबुक तथा ट्वीटरमा सेयर गर्नुहुन्छ भने तपाइँका लागि आवश्यक छ आफ्नो वेब ठेगाना छोटो बनाउनु। किनभने सामाजिक सञ्जालमा तथा इमेल गरेर कसैलाई कुनै वेबसाइटको ठेगाना पठाउँदा लामो लिंक बनिरहेको हुन्छ। जसले गर्दा तपाइँको लिंक सामाजिक सञ्जालमा हेर्नेहरुका लागि आँखाको कसिन्गर बन्छ।
बढ्छ एण्ड्रोइडको ब्याट्री ब्याकअप
१२ मंसिर २०६९, मंगलवार ०५:४५	0 356
स्मार्ट फोन, यतिखेर विश्वभरका मोबाइल खरिदकर्ताको पहिलो रोजाइको फोन हो। नयाँ पुस्ताको यो मोबाइलमा विश्वकै ध्यान आकषिर्त हुनुमा यसमा रहेको कम्प्युटि सुविधा हो। यो फोन कम हातमा अनि गोजिमा अट्ने कम्प्युटर नै हो। गुगलको अपरेटि सिस्टम एण्ड्रोइड भएको स्मार्टफोनले विश्वको तीन चौथाइ बजार लिएको छ। एप्पलको आइफोन भन्दा निक्कै अगाडि छ बजार र प्रयोगको हिसाबले एण्ड्रोइड स्मार्टफोन। यसको प्रयोगसँगै प्रयोगकर्ताले सामान्य जाभामा आधारित मोबाइल फोन भन्दा एण्ड्रोइड फोनले बढी ब्याट्री खपत गर्ने र छिटै ब्याट्री सकिने गुनासो गर्न भने थालेका छन्। प्रयोगकर्ता र्सतक नहुँदा मोबाइलमा विभिन्न एप्लिकेसनहरु बन्द नभएका कारण पनि एण्ड्रोइड फोनले ब्याट्री ब्याकअप कम दिन्छ। तर यसलाई केही उपायहरु अपनाएर बढाउन भने सकिन्छ।
१० मंसिर २०६९, आईतवार १५:२३	4 1,243
मेमोरी कार्डको प्रयोग अहिले सामान्य बनिसकेको छ। हाम्रो दैनिकीको अभिन्न अंग मेमोरी कार्ड पनि बनिसकेको छ। किनभने हाम्रा दैनिक प्रयोगका सबैजसो ग्याजेटमा यसको प्रयोग हुन्छ। फोटो खिच्न देखी भिडियो र गीत सुन्नका लागि पनि मेमोरी कार्डको प्रयोग अनिवार्य छ। मोबाइल, ट्याब्लेट वा एमपीथ्री सबैमा गीत, भिडियो तथा तस्विर राख्नका लागि मेमोरीकार्डको प्रयोग भइरहेको छ। यस्ता कार्डहरु एक, दुई, चार, आठ देखी ६४ जीबी सम्मका पाइन्छन्। तपाइँको मोबाइलमा पहिले नै किनेको एक जीबीको मेमोरी कार्ड छ भने त्यसलाई बढाएर दुई जीबीको सम्म बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि त्यति धेरै गाह्रो प्रक्रिया अपनाउनु पनि पर्दैन। तपाइँ सजिलै एक जीबीको मेमोरी कार्डमा दुई जीबी सम्मका डाटा राख्न सक्नुहुन्छ।
१० मंसिर २०६९, आईतवार १४:५४	0 395
तपाइँको ल्यापटप तथा डेक्सटप कम्प्युटर चलाउँदा त्यसको कीबोर्डको कुनै कीले काम नगर्ने तथा उक्किने समस्या आएको छ। धेरै कम्प्युटर चलाउनेहरुका लागि यस्ता उक्किने र कीले काम नगर्ने जस्ता समस्या सामान्य खालका हुन्। कम्प्युटरको कीबोर्डमा आउने यसखालका समस्या सामान्य भएपनि यीनले कामकाजीहरुलाई हैरान भने पार्छन् नै। यस्ता खालका समस्या कीबोर्ड समय समयमा सफा नगरेका कारण उत्पन्न हुने हुन्।
मोजिला फायरफक्सका सर्टकटहरु
१० मंसिर २०६९, आईतवार १०:३६	0 352
मोजिला फायरफक्स इन्टरनेट चलाउनका लागि धेरै नै मन पराइएको ब्राउजर हो। निशुल्क रुपमा डाउनलोड गर्न पाइने र चलाउन सजिलोका कारण पनि धेरै मानिसका कम्प्युटरमा यो फायरफक्स धेरै छनौटको इन्टरनेट ब्राउजर बन्न सकेको छ। नेपालका कम्प्युटर प्रयोगकर्तामा मोजिला फायरफक्स र गुगल क्रोम उस्तै उस्तै लोकप्रिय छन्।
के तपाइँको वेबसाइट छ सुरक्षित?
९ मंसिर २०६९, शनिबार १९:५४	0 322
इन्टरनेटमा विभिन्न वेबसाइट हेर्ने तथा खोज्ने क्रममा केही वेबसाइटलाई आफ्नो ब्राउजरले खोल्नबाट रोकेको अनुभव गर्नुभएकै होला। त्यसो त गुगलमा र्सच गरेर भेटिएका पेज मध्ये केहीमा यो पेजमा गएको खण्डमा तपाइँको कम्प्युटरमा खराबी आउनसक्छ भनेर चेतावनी दिएको पनि देख्नु भएकै होला। ती वेबसाइटहरु भाइरस तथा मलवेयर प्रभावित भएकाले तपाइँको कम्प्युटरमा नखुलेका हुन्। इन्टरनेट ब्राउजरले नै यस्ता खालका वेबसाइटलाई रोकिदिन्छन्। यदी कुनै वेबसाइटमा भाइरस तथा मलवेयर रहेछ भने त्यसले विभिन्न खालका सफ्टवेयर तपाइँको कम्प्युटरमा राखिदिन खोज्छ। जसले तपाइँको कम्प्युटरलाई बिगार्दैन मात्र तपाइँका सूचनाहरु अज्ञात हृयाकर सम्म पुरयाउँछ। यदी तपाइँ वेबसाइट तथा ब्लग चलाउनुहुन्छ भने तपाइँले आफ्नो वेबसाइट कतिको सुरक्षित र भाइरस मुक्त छ त्यो जान्नुपर्छ।
६ मंसिर २०६९, बुधबार १६:५१	0 407
वेबसाइट, इन्टरनेटको जालोमा समेटिएको विश्वमा सूचना, ज्ञान र व्यवसायको माध्यम नै यही डब्लुडब्लुडब्लु बनेको छ। हरेक विषयमा अनि हरेक व्यवसायका बारेमा एउटा वेबसाइट त पक्कै छ इन्टरनेटमा। कतिपय निशुल्क होलान् त कतिपय सशुल्क। त्यति मात्र नभएर अब व्यक्तिका लागि पनि वेबसाइट आवश्यक हुन थालिसकेको छ। आफ्ना विचार देखी क्षमता देखाउन र त्यसबाट आमदानीको बाटो खोज्नका लागि अपरिहार्य बनेको छ वेबसाइट। निशुल्क बनेका वेब पब्लिसिङ सफ्टवेयर र सस्तिएको होस्टिङ का कारण पनि हरेकलाई वेबसाइट चलाउन सजिलो भएको छ। त्यसमा पनि गुगल एडसेन्सको विज्ञापनको आर्थिक लाभको पक्ष पनि छ। त्यसैले ब्लग र वेबसाइट खोल्नेको लहर चलेको छ।
६ मंसिर २०६९, बुधबार १०:१२	0 435
तपाइँ फिल्मको शौखिन हुनुहुन्छ? टेलिभिजनमा केबुल मार्फत आउने फिल्मी च्यानलका पुराना फिल्म देखी वाक्क हुनुभएको छ? या टेलिभिजनमा विज्ञापन नै विज्ञापनको बीचमा फिल्म हेर्दा हेर्दै वाक्क हुनुभएको छ। फिल्म हेर्नकै लागि सीडी र डीभीडीमा हजारौं खर्चनु भएको त छैन। यदी त्यसो हो भने निशुल्क विज्ञापन नझेलीकन फिल्म हेर्ने उपाय पनि छ। जुन तपाइँको लागि सबै भन्दा उत्तम हुन्छ। फिल्मका शौखिनका लागि केबुल टेलिभिजनको अर्को विकल्प हो इन्टरनेट। जहाँ तपाइँले वर्षौं सम्म हेर्दा पनि नसकिने फिल्महरुको भण्डार छ। त्यसका लागि कुनै द्रूत गतिको इन्टरनेट प्याकेज पनि लिनु पर्दैन। घरमा रहेको सामान्य गतिको इन्टरनेट कनेक्सनबाट नै तपाइँले असंख्य फिल्महरु निशुल्क हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ त्यो हामी सिकाउँछौं आउनुस् भित्र।
४ मंसिर २०६९, सोमबार १३:००	0 286
२४ कार्तिक २०६९, शुक्रबार ०३:१४	1 476
फोटो, फोटोग्राफी प्रविधि र प्रक्रियाबाट तयार पार्ने सजिव चित्र मात्र होइन। फोटो आमदैनिकीको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। कुनै पनि व्यक्तिको परिचयका लागि उसको फोटो नै आवश्यक पर्छ। त्यसो त डिजिटल प्रविधिको विकासले फोटोलाई सस्तो र सहजसँगै सबैको पहुँमा पुर्याएको छ। मोबाइल सेटमा नै उपलब्ध हुन थालेको क्यामेरा र फोटो खिच्ने प्रविधिले जिवन र दैनिकीका सबैजसो पल फोटोमा कैद हुन थालेका छन्। इन्टरनेटमा विकास भएको सामाजिक सञ्जालले त झन फोटोको महत्व र प्रयोजन नै बदलिदिएको छ। फेसबुकलाई फोटोमा मानिसको अनुहार हेर्ने र दैनिकीका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने माध्यमको रुपमा लिन थालिएको छ। एक दिनमा मात्र फेसबुकमा दुईसय ५० मिलियन फोटो अपलोड हुन्छ। त्यसमा साथीभाईले गर्ने लाइक र कमेन्टको संख्या र राख्ने महत्वको स्थान त बेग्लै छ। आउनुस् फेसबुक तथा सम्झनाका लागि खिचिएका फोटोलाई सुन्दर बनाउने उपाय सिकौं।
पुरानै पेज खुल्यो यसो गर्नुस्
२४ कार्तिक २०६९, शुक्रबार ०२:२६	0 320
इन्टरनेटमा विभिन्न वेबसाइट हेर्ने गर्नुभएको होला? यसरी वेबसाइट हेर्दा ती वेबसाइटमा कुनै अपडेट नभएको पाउनुभएको पनि होला। न्यूज पोर्टल देखी सँधै अपडेट भइरहने खालका वेबसाइट पनि तपाइँको कम्प्युटरमा अपडेट छैन भने बुझ्नुस् तपाइँको कम्प्युटरमा धेरै नै DNS cache जम्मा भएको छ। किनभने विभिन्न वेबसाइट हेर्दा अपरेटिङ सिस्टमले स्वत DNS cache स्टोर गर्छ। जसले गर्दा कम्प्युटरमा पहिला खोलेको वेबसाइट दोस्रो पटक छिटो त खुल्छ नै त्यसमा अपडेट भएका पेजहरु भने देखिन्नन्। कतिपय अवस्थामा यसको कारण वेबसाइट ढिलो खुल्ने पनि हुन्छ। जसले इन्टरनेट चलाउनमा तपाइँलाई हैरानी पनि लाग्न सक्छ। यदी यसखालको समस्या तपाइँको कम्प्युटरमा देखिएको छ भने बुझ्नुस् DNS cache Clear गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।